मुटुमा समस्या भएको कसरी थाहा पाउने ?
२०७८ कार्तिक १८ बिहीबार ०९:१७:००
वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. अरुण मास्के भन्छन्– हृदयाघात वा मुटुरोगसम्बन्धी समस्याहरू जोसुकैलाई हुन सक्छ । लक्षण देखिएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ ।
रक्तसञ्चारमा कमी आउँदा प्रत्येक कोषिकाहरूमा असर देखिन थाल्छ । जुन छालामा प्रस्ट देखिने गर्छ । छाला पहेँलो हुनुलाई गम्भीर लक्षणका रूपमा लिने गरिन्छ । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. अरुण मास्के भन्छन्, ‘हृदयाघात वा मुटुरोगसम्बन्धी समस्याहरू जोसुकैलाई हुन सक्छ । केही दशकयता कम उमेरमै मुटुरोगको जोखिम बढेको अध्ययनले समेत देखाएका छन् । तसर्थ, यस्ता लक्षण देखिएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ ।’
जाडोमा हर्टएट्याकको जाेखिम किन बढी हुन्छ ?
मुटुलाई कसरी सुरक्षित राख्ने ? (भिडियो)
मुटु जलिरहेछ... ( फोटोफिचर)